ဒီမိုကရေစီ (Democracy) – ၁ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
start your freedom from your thinking …	aboutactivitiese-libraryF0NTmmWikispublications
ဒီမိုကရေစီ (Democracy) – ၁	Posted by mm thinker on April 8, 2013
Posted in: Knowledge, Politics, Summary.	Tagged: Knowledge, Politics, Summary.	Leaveacomment
-နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်တရပ် မဟုတ်
-လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်ရာတွင် ကျင့်သုံးသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တရပ်သာ ဖြစ်
-Demos (ပြည်သူများ) + kratia or cracy (အုပ်ချုပ်ခြင်း / အာဏာ) = ပြည်သူလူထုက အုပ်ချုပ်ခြင်း စနစ်
-မျက်မှောက်ခတ် အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူမှုတွင် ကွဲပြားခြားနားနိုင်
-ဒီမိုကရေစီဟူသော ဝေါဟာရ ပါရှိနေသရွေ့ ယေဘုယျ တူညီမည့် သဘောတရား (Basic Concept) အတူတူသာ ဖြစ်ရမည်
-ဒီမိုကရေစီသည် လူအနည်းစုက အုပ်ချုပ်သော စနစ်များဖြစ်သည့် အရစ္စတိုကရေစီ (Aristocracy)၊ အော်လီဂါခီ (Oligarchy) တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ တဦးတယောက်တည်းက အုပ်ချုပ်သော စနစ်များဖြစ်သည့် သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ် (Monarchy)၊ အော်တိုကရေစီ (Autocracy) တို့နှင့်လည်းကောင်း ခြားနားသော ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်
-ဒီမိုကရေစီသည် အာဏာရှိသူတို့ကသာ ထိန်းချုပ်သော အာဏာပိုင် အာဏာရှင်ဝါဒ (Authoritarianism)၊ တပါတီအာဏာရှင်စနစ် (Totalitarianism) တို့အတွင်း၌ မဖြစ်ပေါ်နိုင်
တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီ (Direct Democracy)
-ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ချမှတ်ရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ အစရှိသော ကြားခံအဆင့်မရှိဘဲ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက အာဏာပိုင်စိုးကာ ဝင်ရောက် လုပ်ဆောင်ခြင်း
-ဂရိမြို့ပြ နိုင်ငံငယ်များတွင် BC ၅ ရာစုက ကျင့်သုံးခဲ့
-လူဦးရေနည်းပြီ အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌သာ ကျင့်သုံးနိုင်
-အမေရိကန်တွင် ၁၇-၁၈ ရာစုမျာအတွင်းက မြို့ပြ အစည်းအဝေးများတွင် ကျင့်သုံးခဲ့
-ယနေ့ခေတ်တွင် အင်္ဂလန် အချို့ဒေသများနှင့် ဝေလနယ်၊ အမေရိကန် အချို့ပြည်နယ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်၏ အချို့ ကန်တွန် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များတွင် ကျင့်သုံးဆဲ
ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီ (Representative Democracy)
-လူဦးရေ များပြားသော နိုင်ငံများတွင် ပြည်သူများ အားလုံး တိုက်ရိုက်ပါဝင်ကျင့်သုံးရန် ခက်ခဲ့သဖြင့် စစ်မှန်သော ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ခြင်း
-ကိုယ်စားပြု အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယား အဆင့်ဆင့်တွင် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်နေရန် လိုအပ်
-အာဏာပိုင်များကိုယ်တိုင် (သို့) အာဏာပိုင်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသာ ဖြစ်ပါက “အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်” သို့ ဦးတည်နိုင်
-ကမ္ဘာ့ အရပ်ဒေသအများစုတွင် ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးနေ
ဒီမိုကရေစီ (ABSDF လေ့လာရေးစာစဉ်၊ ၁၉၉၅) ကို အနှစ်ချုပ် ပြန်ရေးသည်။ စာရိုက်ဖို့ မပျင်းတဲ့အခါ ဆက်လက် အနှစ်ချုပ် ရေးပေးမည်🙂
Rate this:Share this:EmailTwitterFacebookPrintRedditLike this:Like Loading...
← ကျွန်ုပ်တို့ အလွဲသုံးစား မလုပ်သင့်	မြန်မာ-မွတ်စလင် မုန်းတီးမှုတွေ ဘယ်လို အမြစ်တွယ်ခဲ့သလဲ →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
Comparative Studies (15)
Cross-Border Studies (5)
Ethnic Minority (7)
Existence Magazine (11)
IT & Blogging (26)
Local Knowledge & Local Right (10)
Maghadewa Linkar Thit (3)
Nandar Phone Myint (8)
Political Ecology (12)
Property Right (3)
Reading Notes (7)
Theories and Concepts (7)
Recent Posts	40
Kay Moe Ko’s 2nd Solo Show
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လိင်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူ ပန်းချီဆရာ
Water Color – undated
ပရိုမိုးရှင်း … တဲ့လား
Recent Comments	Pyae Phyo Aung on အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (…Anonymous on အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (…Me Me Kay Khine on အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (…Anonymous on အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (…minswe swe on အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (…Nai (@hhlynnnai) on အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (…သဇင် on အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (…	Tag CloudAnnouncement
IT & Blogging
Nanda Phone Myint
WordpressMyanmar Font Converter	ZG-Unicode Converter CLICK HERE
Unicode-Zawgyi Converter	Unicode Fonts to Zawgyi Reading Converter CLICK HERE
CJ Myanmar	CJ Myanmar Click Here
Blogs Index	Myanmar.Wiki	my.wikipedia Click Here
WikiMyanmar (MOE)	WikiMyanmar Click Here
Myanmar Sar	Blog Stats	254,753 License	MM Free Thinker by mm thinker is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.Based onawork at mmfreethinker.wordpress.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at https://mmfreethinker.wordpress.com/. Myanmar Knote Credit-Art House Graphic Studio, Mandalay, Myanmar. Blog at WordPress.com.